Ciidanka Asluubta oo u Dabbaaaldegay Sanadguuradoodii 45aad | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home ARRIMAHA SIYAASADDA Ciidanka Asluubta oo u Dabbaaaldegay Sanadguuradoodii 45aad
Ciidanka Asluubta oo u Dabbaaaldegay Sanadguuradoodii 45aad
24 Febraayo 2015, Muqdisho (XT): Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa Ciidammada Asluubta Soomaaliyeed ugu hambaleeyay sanad guuradii 45aad ee aasaaskooda, xaflad ka dhacday xarunta ciidankaasi ee magaalada Muqdisho.
Madaxweynaha aya ku amaanay ciidanka asluubtasida hufan oo ay uga soo dhalaaleen hawsha adag ee loo xilsaarey ee dhinacyada difaaca, dhaqancelinta iyo barbaarinta.
Madaxweynaha ayaa hadal ka jeediyey munaasabadda xuska sannadguuradii 45aad ee ka soo wareegtey aasaaska ciidanka ilaaladsagoo hambalyo ku aaddan xuskaasi u direy madaxda , saraakiisha iyo qeybaha xabsiyada ee asluubta loo yaqaano waxaana goobta ku sugnaa saraakiisha ciidanka Asluubta.
Waxaa uu sheegay in Ciidanka Asluubta ay sannadba sannadka ka dambeeya sameynayaan horumar la taaban karo, iyadoo lagu jiro xaalad iyo duruufo adag.
Wasiirka Gaanshaandhigga Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya S/Guuto Cabdulqaadir Sheekh Cali Diini oo ku hadlayay magaca Wasiirka Cadaallada oo hawlo safar ku maqan ayaa dhankiisa hambalyo gaarsiiyay ciidanka Asluubta. “Waan idinkugu hambalyeynayaa sanadguurada 45aad ee aasaaskiina aniga oo ku hadlaya magaca Wasiirka Cadaallada. Ciidanka Asluubta waxa ay ahaayeen ciidan kobciya dhaqalaah wadanka, wax soosaar iyo dhul beereed leh. Waxa uu ahaayeen ciidan barbaariya ubadka Soomaaliyeed.” Ayuu yiri Wasiir Diini.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo so xirayay dabaaldegga munaasabadan ayaa yiri “Ciidanka Asluubta waxay qeyb ka yihiin ciidammada qaran ee aan leenahay ee aan ku faanno. Waxay si xilkasnimo ah uga soo baxeen waajibaadkooda, iyagoon helin taageero ku filan oo ay hawshooda ku gutaan. Is-xilqaankooda ayaa keenay in maanta ay halkan ku soo bandhigaan cutubyo si wanaagsan loo tababarey oo diyaar u ah gudashada waajibaadkooda, iyo weliba inay awoodeen inay iibsadaan gawaari cusub oo shaqada ciidammada lagu fuliyo. Waa talaabo ku dayasho mudan oo aan filayo in qeybaha kale ee ciidammada ay ku dayan doonaan”.
Madaxweynaha ayaa sheegay in dowladda intii karaankeeda ay taageero buuxda oo dhan kasta ah u fidin doonto Ciidammada Asluubta.
Waxaa uu madaxweynaha intaa ku darey inuu rajeynayo in mustaqbalka dhow ay Ciidammada Asluubta dib u hawlgelin doonaan mashaariicdii horey looga bartey sida warshadaha wax soo saarka, beeraha, xarrumaha agoonta iyo kuwo kale.
Madaxweynaha ayaa khudbada ka hor salaan sharaf ka qaatey cutubyo ka tirsan Ciidammada Asluubta, waxaan munaasabadda ka soo qeybgaley Wasiirka Gaashaandhigga S/Guuto Cabdulqaadir Sheekh Cali Diini, taliyeyaasha ciidammada qaranka iyo mas’uuliyiin kale.
Dayactir xoogan ayaa ka socda xaruntii hore Ciidanka Asluubta ee Ex Koontorool oo ay ka bilowday Wasaaradda Cadaaladda ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo kaashanaysa deeq bixiyayaasha. Xaruntan ayaa waxaa laga dhisayaa xabsi ka duwan kuwa haatan dalka ka jira oo loogu talagaley in lagu hayo dadka looga xukumo argagixisada iyo burcad badeednimada meelaha ka baxsan Soomaaliya.
Ciidanka Asluubta ayaa qorsheynaya inaan qof dambe oo Soomaali ah dibadda lagu haynin oo loo soo wareejiyo dalka gudihiisa. Arrintan aya dhawr jeer ooh ore dawladda isugu dayday laakiin u suurtoobi waayay xaaladaha xabsiyada dalka oo aad u liita.
Inkasto maanta ay ahayd mid kuweyn Ciidanka Asluubta iyo qoysaskooda ayaa hadana waxaa nasiib darro ah in inta badan hantidii, goobihii carruurta lagu xanaaneyn jiray, beerihii iyo xarumihii ciidankan lahaayeen ay yihiin kuwa ku burburay dagaalladuu sokeeye oo aysan intooda badan ku jirin gacanta ciidanka Asluubta.
Previous articleMunaasabad lagu Xusay Maalinta Ciidamada Asluubta oo ka dhacday Muqdisho
Next articleMunaasabadaha Muqdisho iyo Caqabadaha Dadweyne